About Us - Ningbo Wegro Izingane Products Co., Ltd
Kwezinsana imoto esihlalweni Gr0 + (0-13kg)
Baby imoto esihlalweni Gr1 + 2 (9-25kg)
Baby imoto esihlalweni Gr1 + 2 + 3 (9-36kg)
lomkhumbi olamandla ongedluli Plus
lomkhumbi olamandla ongedluli Eziyisisekelo
Fix lomkhumbi olamandla ongedluli
Ingane Ukulekelela esihlalweni Gr2 + 3 (15-36kg)
Baby imoto esihlalweni Gr0 + 1 + 2 + 3 (0-36kg)
Ukwesekwa intamo isiguqo
Abangu emuva umvikeli
Isihlalo ibhande adjuster
WE01 lomkhumbi olamandla ongedluli ECE CERT
Iqembu abantu abanazo kahle nge design engineering yengane imoto esihlalweni uye wafika odluliselwe ngombono owodwa ukugcina izingane ephephile uhambo ngemoto.
nini umqondo omusha Kwaphuma phambi ungaqondi, sizokwenza eziningi uphenyo, ucwaningo, futhi zokuhlola ukuphahlazeka ukuhlolwa ukufakazela umqondo kuyigama ephephile. Khona-ke iqembu ngeke lamukele le isixazululo design ekubonile umqondo ku umkhiqizo ngaphansi ezindinganisweni eziphakeme ukuphepha.
Lapho umkhiqizo ivunyelwe futhi kungase kutholakale ukuthi uphephile, ukukhiqizwa nokuphathwa kochungechunge lwemigomo yokuthengwa kukhona izakhi isihluthulelo isihlalo ukuphepha. Ngo Wegro, samukela elawula umphakeli & izinga ukuphathwa ukuze uqiniseke esihlalweni ngasinye thina ekhiqizwa ifinyelela izidingo design kokuqala.
Wegro uzibophezele ithembekile, onokwethenjelwa futhi negama ingane ukuphepha izihlalo imoto umphakeli!
Abantu - Sithi "amalungu ethimba" hhayi "abasebenzi". Sihlonipha futhi ukusekela eqembu lethu njengoba inzuzo yokuncintisana. Silwela okukhanga, ukwakha, ukugcina futhi kusishukumisele abantu abanamakhono kakhulu singathola, abantu abanakekela futhi abasebenza ndawonye njengoba abalingani.